Java Alert Box & Blog — MYSTERY ZILLION
Java Alert Box & Blog
မတွေ့မိလို့ အသစ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ..ဘလော့ဂ်မှာ Java alert box ကလေးထည့်ထားပါတယ်...ဘလော့ဂ်ကို ရောက်တာနဲ့ မင်္ဂလာပါ ကြိုဆိုပါတယ်ဆိုပြီး Alert box လေးပါ.. အဲ့ဒါ အင်္ဂလိပ်လိုထည့်ထားတာ အဆင်ပြေပါတယ်.. မြန်မာလိုပြောင်းလိုက်ရင် Alert Box တော့ ထွက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဖေါင့်မရှိသလိုမျိုး အယ်ရာတွေ တက်လို့ပါခင်ဗျ.. မြန်မာလိုမြင်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲဆိုတာ သိတဲ့သူများ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်..
နောက်တစ်ခုက Drop Down navigation ထည့်တာ အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ပါ...[HTML]http://www.geekblogger.org/2010/02/add-drop-down-menu-widget-in-blogger.html[/HTML] ဒီကနေယူပြီး ထည့်ထားတာပါ..သူပြောသလိုတွေပဲလုပ်တာ..အဆင့်(၃) မှာ Step 3. Now click on AddaGadget and paste the menu code (Copy the code from the downloaded source of the drop down menu) and click on save button. ဆိုတာ ဘာကို ဘယ်ထဲကဟာကိုယူပြီး Paste လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေလို့ပါ.... အဲ့ဒါလေးလည်း ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီကြပါဦးခင်ဗျာ..ကျွန်တော်သုံးထားတာ နံပါတ်သုံး Blue Dawn Drop Down လေးပါ။
ဖိုးသဲ wrote: »
(:((:((:(( ဘယ်သူမှလည်း မကူညီကြဘူးလားဗျာ :(:(:((:((
အီးမေးလ်နိုတီဖီကေးရှင်းမှာလည်း အီးမေးလ်ထည့်ထားပါတယ်.. အဲ့ဒါကလည်း စီဘောက်စ်မှာ ရိုက်သွားတာတွေကို နိုတီဖိုင်း မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..... ဘာတွေပြင်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးကြစေချင်ပါတယ်
တတ်သလောက်တော့ အကြောင်းပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် .
ပုံမှန်က တော့ မြန်မာစာမြင်ရပါတယ် .ကိုဖိုးသဲ အတွက် unicode font alert sample လေးရယ် ကျွန်တော် စမ်းထားတဲ့ ဟာလေးကိုပါ ပေးလိုက်ပါတယ်
<button onclick="alert('မောင်မောင်'); return false;">Click me</button>
onclick event နဲ့ body onload event လေးသာချိန်းလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေပါစေဗျာ .
ဒုတိယတစ်ခုမေးထားတာက ကျွန်တော့် ဆီ မှာ access denided ဖြစ်နေတယ် ဗျ . နောက် ကျော်ခွ ပြီးရင် ဖြေပေးပါ့မယ် ဗျာ
<body> ထဲမှာ အောက်က Code ထည့်လိုက်ယုံပဲ။
မှတ်ချက်။ အခုလို Page Load မှာ Alert box ကို မလိုအပ်ဘဲ ၀ဘ်ဆိုက် ထဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် သုံးစွဲသူတွေ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Vote now in Myanmar Tutorials Web design Contest. My project is Mobile Network.